बढ्यो सरकार निर्माणको सरगर्मी, केका लागि कसको नेतृत्व भन्नेमा किचलो – YesKathmandu.com
बढ्यो सरकार निर्माणको सरगर्मी, केका लागि कसको नेतृत्व भन्नेमा किचलो
शनिबार १६, जेठ २०७२
काठमाडौं । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शुक्रबार बिहानै राजधानीको एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएर सिन्धुली गए । सिन्धुली जानु अघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे बोलेका उनी दिउसो फर्केर सोझै एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट पुगे ।
राजधानीको एक होटलमा सहमतिकै सरकारको प्रसंग उठाएर एमाओवादीकै नेता बाबुराम भट्टराई पनि दाहालसहित ओली निवास पुगेर एक घण्टाको कुराकानी गरे । त्यसपछि दाहाल, भट्टराई ओलीसहित साझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गए ।
दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै काग्रेस पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो भने ओली निवासमा एमालेका शिर्ष नेताको । शुक्रबार भएका दल र नेताहरुका यी बैठकका दौडधुपको मुख्य एजेण्डा छ– ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ । भकुम्पपीडितको राहत र पुनस्र्थापनाको कुरा चलिरहँदा राजनीतिक बृत्तमा भने सहमतिको सरकार निर्माणको सरगर्मी चढेको छ ।
कस्तो सरकार ,कहिले र कसरी बनाउने भन्नेमा विशेष गरी प्रमुख तीन दलबीच आन्तरिक लेखाजोखा चलिरहेको छ । बिषेश गरी एमाले र एमाओवादी सहमतिको सरकार निर्माण अपरिहार्य भन्दै बढी दौडेका छन् । दुबै दल सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट संविधान र पुनर्निर्माणको काम पुरा हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यसैले दुवै दलले कोइरालालाई नया सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिइरहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
अत्यधिक जोखिममा काठमाडौं, तरतलाका कारण सहर नै भासिने खतरा
गुडिरहेको वसमा आक्रमण, १९ को मृत्यु
बाबुरामले भने ‘ओली प्रतिगमणका कुख्यात मतियार हुन्’
राजदूत रायको जवाफः भारतको भूमिबाट ढुङ्गा हाने हामी के गरौ ?
कमल थापा जुटे सत्ता बार्गेनिङमा, बालुवाटार पुगेर मागे उपप्रधानसहित स्थानीय विकास मन्त्री
गणेशमानलाई अझै चिनाउन ‘बलिदान अभियान’
कोइरालालाई पराजित गरी एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित
पहिले भुलबस भयो, नयाँ संविधानमा धर्म निरपेक्षता शब्द रहदैन : केपी ओली
हेलिकोप्टर चढेर अनुगमनमा गएका प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रमा नपुगी निर्देशन दिए,‘सम्झौता अनुसार उपलव्धिमूलक काम गर्नू’
नेविसङ्घमा उमेरको हद ३२ वर्ष !
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफल जारी
लोकमानलाई बचाउन प्रधानमन्त्री दाहालको यस्तो रहेछ सेटिङ
शशांकको स्वास्थ्यमा आशलाग्दो सुधार, पत्नी देख्दा आँसु, पौडेल देख्दा खुसी